Isikhumba esimnyama phakathi kwenkulungwane yesofa
Ifanitshala yeBaothian Co., Sizama ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni.
Iimpawu zesikhumba esimnyama phakathi kwesofa yenkulungwane
1. Isofa yecala elinesihlalo esijongise ekunene.
2. Easy ukuba ukucoca kwaye bekhululekile.
3. Indawo yokuhlala kunye nokubuyela umva kugcwele iintsiba ezithambileyo ukubonelela ngentuthuzelo ebutofotofo.
4. Uyilo lwesofa olunesitayile luya kongeza ubuhle kwigumbi lakho lokuhombisa.
isihlalo sokusekwa kwabadlali abaninzi UQHAGAMSHELWANO NGOKU
isihlalo sokusekwa kwabadlali abaninzi
Isofa yethu emnyama yesikhumba embindini wenkulungwane iza nokujongwa ngokuchanekileyo, okwenza ukhululeke ngakumbi kwaye uthathe i-snap elungileyo. Ngenxa yesikhumba, ayisiyiyo kuphela ixesha elide kodwa kunokuba kulula kwaye kufanelekile ukuyigcina, chukumisa nje kancinci umphezulu ngetawuli. Indawo yokuhlala kunye nokubuyela umva kugcwele iintsiba ezithambileyo ukubonelela ngentuthuzelo ebutofotofo. Iyakwazi ukuhlamba ukudinwa kwakho xa sele ubuyele ekhaya kwaye uhlale kwisofa yesikhumba esezingeni eliphezulu. Uyilo lwesofa olunesitayile luya kongeza ubuhle kwigumbi lakho lokuhombisa.
Chwetheza: Ifenitshala yeSofa yegumbi lokuhlala; Ihotele Suite; Igumbi lasehotele
Material: Ilaphu; Imilenze Stainless; Isiseko esenziwe ngentsimbi eshayinayo
Igama lemveliso: Isikhumba esimnyama phakathi kwenkulungwane yesofa
Inombolo yomzekelo: #1107
Izinto zokumboza: Ilaphu leSuede; Ilaphu
Umsebenzi: L imilo Sofa Sectional
Imilinganiselo ivuliwe(i-CM): 289I-L * 131W * 72H; Elungiselelweyo Ubungakanani
Ubungakanani bokupakisha(i-CM): 295L * 135W * 77H
Ixesha lokuvelisa: 30-45days
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Ukupakisha okungaphezulu okuqinileyo
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Sisiseko sokuvelisa iimveliso zokwenza izinto ukususela ngoku 1985.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: SiseShunde, Isixeko saseFoshan, Iphondo laseGuangdong, China
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Sinento enye yokulandela umkhondo emva kwentengiso. Ukuba kukho nawuphi na umonakalo ovela kwezothutho okanye kumgangatho womgangatho, Siza kufumana isisombululo kwaye sikunike ingxelo.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: MOQ yethu 40HQ okanye 20GP(Iindleko ezongezelelweyo zinokufaka isicelo), ungaxuba imveliso eyahlukeneyo ukudibanisa i-40HQ okanye i-20GP.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Sinamava atyebileyo kwiiprojekthi zehotele kwaye zonke izinto zinokudlulisa ukumelana nomlilo njenge-CA117, BS5852, BS7177, BS7176, kunye ne-E0 / E1.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Sivelisa ikakhulu iiSofa, Isoftware, Uxinzelelo, Abaphindi, kunye nezitulo.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Ewe, sinemibala emininzi esinokukhetha kuyo kwizinto ezahlukeneyo ezinje ngesikhumba se-ngqolowa ephezulu, PVC, KUNGENZEKA, okanye ilaphu.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Nje ukuba sifumane idiphozithi, ingathatha malunga neentsuku ezingama-30 ~ 35.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Imiqathango yentlawulo iya kuba yi-FOB kwi-SHENZHEN port. T / T., 35% idiphozithi, ukulinganisela ngaphambi kokuziswa.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: No, singabenzi be-OEM kunye ne-ODM, Zonke iimveliso zenzelwe abathengi bethu.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Singathumela ilaphu okanye isampulu yesikhumba ngqo kuwe. Imveliso ye-ODM kufuneka ihlawuliswe umrhumo wesampulu emva 10 ii-oda ze-pcs ziya kubuyisa umrhumo wesampula.
Iingcingo eziphezulu zobhedu ukuqinisekisa ukuba zonke zixhunyiwe ngokufanelekileyo kunye nokhuseleko: Iwaranti yesofa yile 2 iminyaka yolwakhiwo lwangaphakathi, 1 unyaka wesikhumba sangaphandle; Umatrasi 10 iminyaka yolwakhiwo lwangaphakathi.
chukumisa ngaphakathi 24 hours.
Ifanitshala yeBaothian Co., Sizama ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni. © 2020 Sizama ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni umthetho wabucalaUmthetho WOKUBUYISAInkqubo yokuhambisa